I-Clarke University Admissions: UMTHETHO WESIKOLO, Uncedo lwezeMali
I-Clarke University Admissions Overview:
I-Clarke University iyamkela malunga nabafundi abalishumi abayishumi kubo bonke abafakizicelo, ngamnye okwenza ukuba kungakhethi. Ukufaka isicelo, abafundi abanomdla kufuneka bafake izicelo ezizalisiweyo, iimvavanyo zokuvavanya ukusuka kwi-SAT okanye UMTHETHO, kunye neempendulo eziphakamileyo zezikolo. Nangona i-campus ityelela kunye nodliwano-dliwano-ndlebe aludingeki, bayakhuthazwa ngamandla kubafundi abaza kuba neva yesikolo.
Khangela iwebhusayithi yeClarke ngolwazi olungakumbi, kwaye uqhagamshelane ne-ofisi yokungena kunye nayiphi na imibuzo enayo!
I-Clarke University Admissions Overview: 65%
I-GPA, iSAT kunye ne-ACT Graph ye-Clarke Admissions
SAT Ukufunda okubalulekileyo: 423/530
ISAT Math: 433/530
I-SAT ukulinganisa amanqaku kwiikholeji zase-Iowa
UMSEBENZI IsiNgesi: 19/24
UMTHETHO UMathe: 18/25
Uthelekiso lweempawu zeekholeji zeekholeji zase Iowa
Clarke University Incazelo:
I-Clarke University yincinci yecala yama-liberal yobuKatolika e-Dubuque, eIowa. I-campus engama-55 ihlala kwi-bluff ejongene nomzi kunye noMlambo waseMississippi. IYunivesithi yaseDubuque , iKholeji yaseLoras, neKholeji yeeKholeji zeBhayibhile iyingxenye engamayela ukusuka kwiCampke. Iinkalo zobuchwephesha ezifana nobuhlengikazi, imfundo kunye nezoshishino zithandwa kakhulu kuClarke, kodwa abafundi baya kufumana amaninzi amathuba okufunda ubugcisa bobugcisa kunye nezesayensi.
Izifundo zixhaswa ngumlinganiselo ophezulu we-11 ukuya ku-1 womfundi / umgaqo-faculty. Ngokubanzi, i-Clarke ibonisa ixabiso elixabisekileyo, kwaye uninzi lwabafundi lufumana uhlobo oluthile lwe-grant aid. Isikolo sinokugcinwa ngamandla kunye nezinga lokugqiba iziqu (ngokumalunga nomsebenzi wesiprofayili), kwaye unomsebenzi ophezulu kunye nezikolo zokubeka esikolweni.
Ubomi bomfundi busebenza kunye nemibutho engaphezu kwe-30 yemfundo esemthethweni kunye neminye imisebenzi eminye yemfundi. Ngaphambili kwezemidlalo, iClakeke Crusaders incintisana kwiNkomfa ye-NAIA Midwest Classic. Amacandelo aseyunivesithi amadoda asibhozo abesibhozo kunye nabasibhozo abafazi abangama-8. Imidlalo edumeleyo ibandakanya ibhola lebhola, i-softball, ibhola yebhoksi, kunye nomzila kunye nensimu.
Ubhaliso lwabonke: 1,043 (i-801 izifundo zakudala)
Ukuhlukana kwesini: 34% Amadoda / 66% Abesifazana
91% Ixesha elipheleleyo
Isifundo kunye neMali: i-$ 30,900
Igumbi neBhodi: i-$ 9,200
Ezinye iindleko: $ 3,200
Iindleko ezipheleleyo: $ 44,500
I-Clarke University Financial Aid (2015 - 16):
Izibonelelo: $ 18,463
Imali: $ 8,094
I-Popular Majors: Ubugcisa, i-Biology, uLawulo lwezoShishino, uLonxibelelwano, iMfundo, uLondolozi, i-Psychology
Ukugcinwa kwabafundi beNyaka yokuqala (abafundi bexesha elipheleleyo): 71%
Ireyithi yokuQinyezelwa kweNyaka eyi-4: 49%
Ireyithi yoNyaka weeNgqesho ze-6: 61%
Imidlalo Yabantu: I- Baseball, iBholing, Ibhola lebhola, iVolleyball, iBhola lebhola, I-Track kunye neSigcawu, iGalofu, iNgcaciso, iLizwe loMnqamlezo
Ezemidlalo zaBasetyhini: I- Bowling, iVolleyball, iSofballball, Iqhola lebhola, iBhola yeBhola, Umkhondo kunye neNdawo, iGalofu, ilizwe eliPhambeneyo
Ukuba Uthanda iYunivesithi yaseClakeke, Unako ukungafani nalezi zikolo:
University of Saint Ambrose
KwiNyuvesi yaseMount Mercy
University of Carroll
I-University yasePortordia yasePortland
IYunivesithi yaseLa Verne
I-Salish Kootenai College Admissions
Ukukhuthazwa kweKrismesi Imibuzo ngeengelosi
Indlela Yokubiza "Siyabonga" ngesiTshayina
Iimpawu Zobuntu Ukuba Yi-Skateboarder Efanelekileyo
Indlela yokutshintsha ii-Oil kwi-Mustang yakho yeFransi
Iprogram yokwenza umsebenzi: Ngaphakathi, Kuye, Kuye, nakwi-At
Iintlola zeBhinqa zeManyano
Iimpawu eziPhambili zeZilwanyana zasekhaya